MV ထဲကလို တကယ့်ဘုရင်ကြီးဖြစ်သွားရင် Jackson Wang တစ်ယောက် ဘာတွေလုပ်မှာလဲ? | News Bar Myanmar
MV ထဲကလို တကယ့်ဘုရင်ကြီးဖြစ်သွားရင် Jackson Wang တစ်ယောက် ဘာတွေလုပ်မှာလဲ?
ကေပေါ့ပ်လောကရဲ့ အောင်မြင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ GOT7 ကတော့ ပြီးခဲ့​တဲ့လက Not By The Moon ဆိုတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေဆီ ပြန်လာခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MV ထဲမှာ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်ရအောင် ခန့်ညားနေကြပေမယ့် ရိုက်ကွင်းမှာတော့ သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဟာသတွေ လုပ်နေကြတာပါ။
MV ထဲမှာ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးလို ဩဇာကိတ္တိမအပြည့်နဲ့ရာဇပုလ္လင်မှာထိုင်ပြီး သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ Jackson ကို တစ်ယောက်ယောက်က တကယ့်ဘုရင်ဖြစ်သွားရင် ဘာလုပ်မလဲလို့ မေးတဲ့အခါ သူပြန်ဖြေတဲ့အဖြေဟာ ပရိတ်သတ်တွေသူ့ကို ပိုမချစ်ပဲမနေနိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော်သာ ဘုရင်ကြီးဖြစ်သွားရင် fan ေတွကိ​ု နေ့တိုင်း ဖျော်ဖြေပေးမှာ။ နေ့တိုင်း concert တွေလုပ်မယ် လက်မှတ်မလိုဘူး အလကားကြည့်။ ပြီးတော့ နေ့တိုင်း album ထုတ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ထုတ်သမျှ အခွေတွေပစ္စည်းတွေကို အိမ်တိုင်ရာရောက် အလကားပို့ပေးဦးမှာ ဒါပေမယ့် ဝမ်းနည်းစရာကတော့ ကျွန်တော်ကတကယ့်ဘုရင်မဟုတ်လို့ အားလုံးဆောရီးပါ” လို့ အရွှန်းဖောက်ပြောကြားခဲ့တာပါ။
အမြဲဟာသတွေပြောတတ်တဲ့ Jackson ကြောင့် သူ့ပရိတ်သတ်တွေဟာ နေ့တိုင်းရယ်မောနေရတာမှန်ပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ ရယ်ရရုံတင်မက ရင်ထဲပါထိသွားကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေလဲ album တွေ အလကားလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Jackson တစ်ယောက် တကယ်ဘုရင်ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးဖို့ လိုမယ်နော်။
Next မော်ဒယ်/သရုပ်ဆောင် Park Ji Hoon ကွယ်လွန် »
Previous « Kdrama ချစ်သူတွေအနေနဲ့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ မိန်းမတွေကစပြီး ဖောက်ပြန်လိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်း (၁၆နှစ်အောက်ကြည့်ရန်မသင့်တော်ပါ)